Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Afgooye iyo deegaano hoos taga | Keydmedia
Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Afgooye iyo deegaano hoos taga
Saraakiisha degmada ayaa sheegay in ku dhowaad 1,500 oo guri ay qoysaskii deganaa isaga barakaceen kadib markii biyugu galeen xaafadahooda.
AFGOOYE, Soomaaliya - Wararka laga helayo degmada Afgooye ayaa sheegaya in wabiga Shabeelle uu ku fatahay maanta deegannada Basra, Sabiid, Caanoole,Deg-Wariiri iyo qaar kale, oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Ku dhawaad 1,500 oo qoys ayaa ka barakacay guryahooda markii ay biyuhu buuxsameen, iyagoo u cararay degaanada aan wali fatahaadda gaarey, halkaasi oo ay ku dhibaataysan yihiin, waxaana Saraakiisha gobolka codsadeen in la caawiyo.
Fatahaadda waxay kusoo beegmaysaa xili gobolka ay dagaallo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda, AMISOM oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab ay ka soconayaan, kuwaasoo horey ugu qasabay dad badan inay xaafadahooda isaga cararaan.
Sanadkii tagey, Wabiga Shabeelle ayaa fatahaado ka sameeyay Beledweyne iyo degaanno kale oo gobollada Shabeellaha Hoose katirsan, waxayna barakaciyeen dad aad u badan, iyadoo ay baabi'iyeen biyaha dhul beereed dalagyo ku yaallay.
0 Comments Topics: fatahaad wabiga shabeelle
Warar 23 July 2020 8:42